Umatshini wokwenza i-Thermoforming, izixhobo ze-Thermoforming-GTMSMART
GTMSMART Oomatshini Co., Ltd.lishishini eliphezulu-lobuchwephesha elidibanisa i-R & D, imveliso, ukuthengisa kunye nenkonzo. Iimveliso zethu eziphambili zibandakanyaOluzenzekelayo Thermoforming Machine kwaye Umatshini wePlastiki weThermoforming Machine, Umshini weplastiki wokwenza umatshini, Umatshini wendebe yephepha, Umatshini wesitya sephepha, umatshini wepleyiti yephepha njl.Siphumeza ngokupheleleyo inkqubo yolawulo ISO9001 kwaye ngokungqongqo esweni yonke inkqubo yemveliso. Bonke abasebenzi kufuneka bafumane uqeqesho lobungcali ngaphambi kokuphangela. Yonke inkqubo yokulungisa kunye neyokuhlanganisa inemigangatho engqongqo yobugcisa yesayensi. Iqela eligqwesileyo lokuvelisa kunye nenkqubo epheleleyo yomgangatho iqinisekisa ukuchaneka kokulungiswa kunye nokuhlanganiswa, kunye nokuzinza nokuthembeka kwemveliso.
Umshini weplastiki wokwenza umshini: Ngokukodwa ukuveliswa kwezikhongozeli zeplastiki ezahlukeneyo (iqanda letreyi, isitya seziqhamo, izikhongozeli zepakethe, njl. Njl.
Indebe yeThermoforming Machine ikakhulu yokuvelisa izikhongozeli zeplastiki ezahlukeneyo (iikomityi zejeli, iikomityi zokusela, izikhongozeli zephakheji, njl. Njl.
Lo matshini we-thermoforming usetyenziselwa ukuvelisa iimfuno eziphezulu zokutya / ukutya okukhawulezayo okutsha, iikomityi zeplastiki zeziqhamo, iibhokisi, iipleyiti, isikhongozeli, kunye neyeza, iPP, iPS, iPET, iPV, njl.